Ụgbọ okporo ígwè ARSIV - RayHaber
[22 / 08 / 2019] Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda Demiryolu İşbirliği	06 Ankara
[22 / 08 / 2019] Turkey, World Lighting Production Base Iji Nwee N'ịga na Target	34 Istanbul
[22 / 08 / 2019] Ihe omumu di iche-iche nke ihe eji enwu enwu, İstanbulLight 3. Na-ekwu okwu na Mgbakọ Lighting Summit	34 Istanbul
Homeụgbọ okporo ígwèỤgbọ okporo ígwè
Black Train laghachiri na Balıkesir
Ugbo ikuku nke TCDD General Directorate gbazitere Yunus Emre Obodo nke Manisa na-alaghachi na Bal backkesir. Onye otu AK Party Balikesir Mutlu Aydemir na nkọwa ya banyere ụgbọ ala ahụ enyerela Manisa'ya nwa oge gara aga ekwuputala na nloghachi nke Balikesir. Aydemir mere nke ya [More ...]
Turkey Mbụ National Electric Train Set
TÜVASAŞ na-aga n'ihu na-echepụta Ọdụ ụgbọ oloko nke ala na nke ụlọ na nke mbụ ma na-akwado ịkwado Milli Tren na ụlọ ụlọ. Ejiri aluminumlọ ụgbọ oloko a na TÜVASAŞ mee ya na ahụmị ahụ wee bụrụ nke izizi na njirimara a. [More ...]
TÜVASAŞ site na 1951 rue Oge
Wasgbọ njem ụgbọ ala bidoro na 1866 nke ala anyị bụ nke a na-eme site na ugbo ala nke ebubata ma na-arụzi ya ogologo oge. Ọnọdụ a emeela ka nsogbu na nkwụsị na njikwa okporo ụzọ na-aga n'ihu, [More ...]
Nhazi usoro ụgbọ oloko nke TÜVASAŞ mebere bụ ụgbọ 3 n'ụdị DM + M + DM. Mgbe agbakwunyere M wagon n'ụgbọ okporo ígwè ya na ugbo ala 3, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ụgbọ okporo ígwè nke nwere ugbo ala 4, ụgbọ ala 5 ma ọ bụ 6. [More ...]
Azụ ahịa Azerbaijan ka a ga-emepụta na TUDEMSAS
36 Azerbaijan emepụtala ugbo ugbo ugbo abuo maka TÜDEMSAŞ maka nde dollar. Onye isi nchịkwa Başoğlu kwuru na e mechara nyocha ahụ nke ọma ma sị, "Anyị ga-emepụta ụgbọ ala 600" dị ka Feride Cem si Sabah; "Turkey na Azerbaijan na Baku-Tbilisi-Kars (BTK) [More ...]
Kedu mgbe a ga-emecha Buca Subway?
Kwadoro site na Izmir Metropolitan Municipal Buca Subway Ministry of Transport General Directorate of Infrastructure Investments mma. Ọrụ ahụ, nke na-eme na atụmatụ ntinye ego 2018 nke İzmir, ga-abụ 13,5 kilomita dị ogologo mita. Mgbe Narlıdere Metro oru ngo [More ...]
TCDD 1 mere nkwupụta banyere Marmaray Breakdown nke onye ahụ dara mbà
Akwụsịre akwụkwọ mkpegharị n'ihi ụda na Marmaray na Kadıköy, ndị njem nọ na-aga ije na steepụ. Mgbe ụgbọ ala ahụ meghere ruo oge ụfọdụ, 1 ahụ ụjọ juru, mgbe onye njem na-achọ ịpụ n'ụgbọala merụrụ ogwe aka ya. Mgbe mkpochapu ihe kpatara ya, ụgbọelu na-agafe na Kadıköy na-edozi. [More ...]
TÜDEMSAŞ na - aga n'ihu ịghọ ụwa nke eji ụgbọala ya
TCDD Transport Inc. General Manager Erol Arikan na ịdọkapụta mbon natara ihe ọmụma banyere ọnọdụ nke mmepụta na idozi ụlọ ọrụ gara TÜDEMSAŞ. TÜDEMSAŞ General Manager Mehmet Başoğlu so n'ụgbọala Manufacturing Factory na R & D Department na nchoputa [More ...]
Onye isi njikwa nke TCDD, dị na TÜLOMSAŞ
TCDD General Manager Ali İhsan Uygun, TÜLOMSAŞ hụrụ nchọpụta na ụlọ ọrụ ahụ. Director General TCDD Ali Ihsan Uygun, bụ onye natara ozi banyere mmepụta nke engines mba na locomotives sitere na TULOMSAS General Manager Hayri Avci, nọ na TULOMSAS Museum, 1961 [More ...]
Site na Sivas ruo n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ụwa
Turkey Railway Machines Industry General Manager Mehmet Basoglu, a mara ọkwa na nnata nke iwu maka ibu ụgbọala ahịa na mba Europe. Na-enye ozi dị mkpa maka ịkwa ụgbọ ala ndị e mepụtara maka mmepụta na Poland, Germany na Austria [More ...]
Biputa Oziọma site na Başoğlu na Iftar Program of TÜDEMSAŞ
Na usoro ntụrụndụ ahụ, nke ghọrọ ọdịnala, ndị isi oche nchịkwa TÜDEMSAŞ, ndị nnọchiteanya ndị otu na ndị ọrụ TÜDEMSAŞ mere ka ọ bụrụ ọnụ. N'ikwu okwu n'usoro ihe omume a, TÜDEMSAŞ General Manager V. Mehmet Başoğlu mepụtara mmepụta maka Poland, Germany na Austria na maka mmepụta [More ...]
Balıkesirere na ozioma! .. Locomotive steam na-alaghachi
General Directorate nke Turkish State Railways gbazitere Yunusemre Manisa Municipality ga-laghachiri uzuoku locomotive Balıkesir. TCDD na 2 557 puku pound na protocol aka n'etiti Municipality of Yunusemre plus a otu afọ mgbazinye n'ọnọdụ KDV na ẹka Manisa [More ...]
CHP IHE: 'Gịnị bụ obodo ndị na-agbaziri ego nwere ala na-azụ?'
Ahmet Akın, borce E nwere obodo na ụgwọ. Obodo ahụ na-abanye usoro iwu ahụ na TCDD na ịgbazite locomotive maka otu afọ na 2 puku 557 lira tinyere VAT. Ọ dabara na ihe kpatara ya! Gịnị mere eji agbazite? Ihe mgbaru ọsọ bụ naanị train train 20 [More ...]
A na-eziga Balizkesir Land Historic Land na Manisa
Balıkesir Station gosipụtawo ka a nostalgic ụgbọ okporo ígwè ala efere taps gosipụtawo site General Directorate zigara Manisa. Balıkesir-eje ozi na xnumx'l afọ na banyere 1960 afọ mgbe adịkwa ya agha na technology egosipụta na ihe Station Balıkesir efere 'Black Train' [More ...]
Gaa na TUDEMSAS
Transportation na Infrastructure Deputy Minister Enver İskurt na Selim Dursun Turkey Railway Machines Industry Inc. (TÜDEMSAŞ) Deputy General Manager Mehmet Başoğlu gara n'ọfịs ya. Ụgbọ njem na ihe ndị mepere emepe na-abịa Sivas maka nyocha na nleta dị iche iche [More ...]
New Generation National Wagon si TÜDEMSAŞ
Ise ụdị ugbala nile na atọ di iche iche TÜDEMSAŞ malitere uka mmepụta nke asambodo site emecha bogie, Deputy General Manager Mehmet Basoglu, kwuru na ọgbọ ọhụrụ nke mba ibu ugbala si 2019-2020 250 afọ na-ezube na-emepụta iberibe. nkà na ụzụ ya ikpeazụ afọ isii [More ...]
Mkpebi Flash Banyere Ebube Na-ere Wagon na TCDD!
Na nke ikpeazụ 7 ọnwa na Sakarya, a na-anụ mkpọtụ ugboro ugboro, ebe ụlọ ọrụ ndị dị ugbu a malitere ịkwasa ọkwa mgbasa ozi ha na 1. Na-agbaso mgbanwe nke akụ na ụba na ọnụego mgbanwe; Dịka na mba nile, ụlọ ọrụ dị na Sakarya [More ...]
French INVEHO chọrọ ịmepụta mmepụta ya na TÜDEMSAŞ
Ndị France na-ahụ maka ọrụ ndị a na-arụ site na ịga TÜDEMSAŞ, kwupụtara na ohere mmepụta ahụ nwere ihe ịga nke ọma ma nye ìhè ọkụ na-emepụta mmepụta ihe. N'ụbọchị ndị na-abịanụ, ndị nnọchiteanya nwere ọrụ 6 na ndị ọrụ 400 na mpaghara atọ dị iche iche na France [More ...]
INVEHO na TÜDEMSAŞ tụlere ohere imekọ ihe ọnụ
Na nzuko a na-enwe n'etiti INVEHO na ndi isi ochichi TÜDEMSAŞ, a choputara ihe oru mmeputa. Ndị nnọchianya nke ụlọ ọrụ ndị gara TÜDEMSAŞ, Fredeic Copin na David Groliere, nyere ozi banyere INVEHO n'oge nzute ahụ n'okpuru nchịkwa nke onye isi oche Mehmet Başoğlu. ibu [More ...]
Onye Na-achọ Ka A Na-ajụ Otu Nde Ndeka Locomotive Steam Mbụ
Ònye Na-achọ Ka Ọ Bụrụ Onye Ndekọ? Ajụjụ a jụrụ n'asọmpi ahụ chetaara anyị otu mbụ n'ime ụlọ na nke mba na-emepụta ihe ndị a na-eme na steam locomotives. Akuko nke ugbo ahihia anyi bu nke edere n'akwukwo ogugu ndi ozo n'akwukwo ihe ugbo anyi di ka ndi a; Adnan Menderes 1957 na Ankara [More ...]
Çerkezköy-Silivri n'etiti ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè gbajiri. N'ịchọpụta na a gbajiri ígwè ahụ, ígwè ahụ na-akwụsịtụ ụgbọ okporo ígwè ahụ ma kwatuo ụgbọ ala ndị e ji ebu ájá. Dị ka ozi natara, 12 bụ na Eprel Fraịde na 03.00 Çerkezköy-Ndị ebe dị n'etiti silivri [More ...]
SE 10000 National Electric Enekpeing Eurasia Rail 2019 Segilendi
The ngo, Turkey nanị na ndị kasị ibu n'ụwa 3. Eurasia Rail mere na 2019 ụgbọ okporo ígwè na okporo ígwè okporo ígwè. Ihe ngosi, nke bu nchikota nzuko mba nile nke ndi na-eme mkpebi na ihe ndi ohuru n'ime oru ugbo ala, [More ...]
Enwe Mmasị n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè National na Eurasia Rail
Edere Selim Dursun, Deputy Minister of Transport and Infrastructure, Eurasia Rail fair, nke a maara dị ka otu n'ime ụlọ ahịa kasị ukwuu n'ụwa kachasị na Eurasia. Republic of Turkey Ministry of Transport and Infrastructure, Turkish State Railways na ndị enyemaka ya; [More ...]
A na-egwu locomotives na TÜLOMSAŞ
mbụ ya kpebiri ka ghọrọ ka digital nyiwe nke locomotive usoro dị na ụzọ map na-ekpebi n'ihi nke ọmụmụ na noo rụrụ n'ime Office nke Digital Nchigharị Tọrọ ntọala na Tulomsas banyere 1,5 afọ gara aga. Na a na-ekwu, Turkey mbụ na mpaghara mba [More ...]
Ụlọ nke Wagon na Bilecik Youth Step Step by Step
Bilecik Mayor Nihat Can, Republic of 100. O nyere ozi banyere Vagon Cafe, otu n'ime ọrụ nke Bilecik. Nkwupụta na; '' Hamsu Wagon Café na Bilecik'imizin Youth Centre site na nkwụsị '' okwu ndị na-eji Mayor Nihat Can, ndị na-esonụ [More ...]
Ndi 'Black Train' ga - egosi na Burdur Rail Station?
Enwere ugbo ugbo ala na ngosi na ụgbọ okporo ígwè Burdur, nke nọ na-echere ụgbọ okporo ígwè ruo ọtụtụ afọ. Ịga n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè n'obodo ahụ na ụlọ ọrụ ndị a haziri ahazi, na mmezigharị atụmatụ nke ịmegharị ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ ala ụgbọ ala ụgbọ ala a na nkwupụta nke ọha na eze 'ụgbọ okporo ígwè' site na ebe [More ...]
Turkey, World Lighting Production Base Iji Nwee N'ịga na Target
Ihe omumu di iche-iche nke ihe eji enwu enwu, İstanbulLight 3. Na-ekwu okwu na Mgbakọ Lighting Summit
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (324) July 2019 (637) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (494) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)